Nyowani Thermomix TM5 | ThermoRecipes
Nyowani Thermomix TM5
Nhasi, Muvhuro, iyo nyowani inoenda kunotengeswa kuSpain. Nyowani Thermomix TM5 iyo yakapihwa neChishanu pasirese na Vorwerk.
Neiri kicheni robhoti ivo vakavandudza akasiyana maficha eakakurumbira modhi TM31 kuitira kuti zvienderane nezvinodiwa nevashandisi.
Asi ngatiendei nezvikamu:
1 Chii chavakagadzirisa?
2 Uye mutengo?
3 Ini ndoda kutenga iyo Thermomix TM5
Kunze kwekuwedzera ergonomic uye dhizaini dhizaini, Vorwerk yaita shanduko dzakasiyana senge mune iyo Varoma and in the girazi vane kukura kukuru. Kwete kuti mutsauko wakanyanyisa, asi zviri nani kukodzera kumhuri hombe. Iyo Varoma nyowani inokwana 3,3 litita uye girazi re2,2 litita.
Mukombe uye shavishavi zvakagadziridzwa zvakare. Dhizaini yacho yakafanana chaizvo asi zvimwe zvemazuva ano kuita zvirinani mabasa ayo.
Iko kwave nekuchinja kwakakosha kwave kuri muvharo kuvharwa kwayo mu Nyowani Thermomix TM5 zvichave otomatiki. Zvakare musarudzo tembiricha, ikozvino kugona kubika pa120º. Injini ichaita ruzha shoma uye beep yambiro ichave yakasiyana kubva zvino.
Chimwe chiitiko ndechekuti ine kubata screen color uye imwechete sarudza kubva kwaunogona kudzora iyo nguva, tembiricha uye kumhanya.
Asi pasina kupokana kufambira mberi kukuru kwave kuri kwayo system ye Kutungamira Kubika. Icho chigadzirwa chine padivi maunogona kuisa Thermomix Dhijitari Mabhuku. Chishandiso chinoratidza otomatiki nzira yekuraira nhanho nhanho, kugadzirisa zvese tembiricha nenguva. Nenzira iyi, vashandisi vanongofanirwa kuwedzera izvo zvinoshandiswa uye nekumhanyisa kumhanyisa kutonga.
Ndine chokwadi chekuti vashandisi vatsva vachada zvese izvi zvitsva asi zvakadii nezvedu isu tine mamwe mamodheru?
Avo vedu vane iyo TM31 modhi havafanirwe kunetseka nekuti mabikirwo uye mabhuku ari inoenderana zvizere. Ichine kona yekuruboshwe, sikero uye spike kumhanya, kunyangwe izvozvi vanoidaidza kuti "kukanya basa".
Zvinoenderana nenyika imwe neimwe nemari yayo. Pano kuSpain, mutengo unenge uripo 1100 € uye ichasanganisira hwaro hwemuchina, girazi resimbi isina tsvina, bhasiketi, butterfly uye spatula, varoma uye bhuku redhijitari rine 197 resipi inotsiva iyo "Inokosha" uye ine musoro wekuti "Kubika zviri nyore uye zvine hutano."
Ini ndoda kutenga iyo Thermomix TM5
Kana iwe uchida kutenga iyo nyowani Thermomix TM5 iwe unongofanirwa kupinda muchikamu Tenga Thermomix TM5 kana tinya pane iyi inotevera link.
THERMOMIX TM5 NEMUNHU WESE ...
Ndinovimba iwe unofarira uyu mutsva modhi!
Tsvaga mamwe mabikirwo e: General
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Zvinyorwa » General » Nyowani Thermomix TM5
Takaburitsa bhuku redu rekutanga !!
Iwo mabikirwo akanakisa ekutitora isu kuenda kumahombekombe uye dziva